2pcs / Set သံပုရာနှင့်လိမ္မော်ညှစ်စက်များနှင့် Reamers များမီးဖိုချောင်သုံးကိရိယာများကိုလေပေါ်မှာ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပေး | WoopShop®
2pcs / Set သံပရာရည်နှင့်လိမ္မော်ညှစ်စက်များနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုလေမှုတ်ပေးသည်
2pcs / Set သံပရာရည်နှင့်လိမ္မော်ညှစ်စက်များနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုလေမှုတ်ပေးသည် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအမျိုးအစား: ညှစ် & Reamers
item: Lemon Squeezer ရေမှုန်ရေမွှား Tool ကို
fit: သံပုရာ, လိမ္မော်
Size: 10 စင်တီမီတာ
အလေးချိန်: 30 ဂရမ်
ဒီဗူးတွင်ပက်ဖြန်းသည့်အကြီးတစ်ခု၊ ဤသည်ဌန်အငယ်နှင့်ကြီးမားသောနှစ် ဦး စလုံးအသီးကိုသီးသို့ဝက်အူဖို့ကစံပြစေသည်။ Lemon, Orange, Lime, Grapefruits, Tangerines and Pomelos တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
အသုံးပြုရန်နှင့်သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည် သစ်သီးများကိုညှပ်ရန်သို့မဟုတ်ညှစ်ရန်လိုအပ်သည်ရုံ အောက်ဖက်လိမ်အမှတ်အသားကိုအသီးများထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ လက်နှင့်လက်ချောင်းများကိုထိခိုက်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပါ။
အသုံးပြုပါတယ် သင့်ရဲ့ချက်ပြုတ်ပုစွန်ပေါ်သို့မှည့်သောသံပုရာရည်မှအသီးဖျော်ရည်ကိုထုတ်ယူသည်အသုပ် သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။
နွေရာသီမှာငါတို့ အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်သောသစ်သီးများကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သို ထား၍ ၎င်းကိုစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေနိုင်သည် အခါတိုင်း တိုက်တွန်းပါ။ သို့သော်လူများစွာ သစ်သီးဝလံများသည်ခုတ်လှဲခံရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ အဆိုပါမှုတ် လည်း sealer အဖြစ်နှစ်ဆ။ သင်၏အသီးဖျော်ရည်ကိုရေခဲသေတ္တာပေါ်တွင်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ထည့်ခြင်းဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်ထားပါ။
ကုန်ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခု လျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ငါအကြံပေး
Minsk ကို Minsk သို့ပို့ဆောင်သည် - ၃ ပတ်၊ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ခဲ့သည်။ Trifle (Citrus မှဖျော်ရည်၏ဤသေးငယ်သော extender) သည်ထင်ရသော်လည်းမီးဖိုချောင်တွင်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ shish kebab, salad, marinade! အေးဆေး! အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။